भारत किन वार्तामा बस्न चाहन्न ? « Jana Aastha News Online
भारत किन वार्तामा बस्न चाहन्न ?
प्रकाशित मिति : १५ जेष्ठ २०७७, बिहीबार १०:४५
प्रधानमन्त्री मोदीसँग टेलिफोन वार्ताको लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत सातादेखि प्रयास गरेपनि सम्भव नभएको खबरहरु बाहिरिएका छन् । पछिल्लो एक सातामा दुई पटक प्रयास गरेपनि टेलिफोन वार्ता हुन नसकेको उच्च स्रोतको दाबी छ । पछिल्लो दश दिनमा भारतीय राजदूत क्वात्रालाई धेरै पटक बालुवाटार बोलाइयो । परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि नयाँ दिल्लीस्थित दूतावासमार्फत् साउथब्लकसँग नियमित सम्पर्क गरिरहेको छ ।
नेपालले पछिल्लो विवाद समाधान गर्ने उद्देश्यले वार्तालाई नै जोड दिँदै आएको छ । तर,मुखले वार्ता गर्ने भनेपनि भारतको व्यवहारले त्यो अवस्था देखिएको छैन । ‘वार्तामा नबस्ने पनि भन्दैनन्,मिति तय गर्न पनि हिच्किचाउँछन्’ स्रोतले भन्यो ‘उनीहरुले नेपालको संसदबाट हुने निशान छाप संशोधन र पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमलाई कुरेजस्तो छ ।’
तर,भारतको आशय सकेसम्म वार्ता नै गर्न नपरोस् भन्ने हो । विवादित विषयलाई त्यत्तिकै झुलाउने रणनीतिअनुरुप उसले केही समयअघि कोरोना संक्रमणको अन्त्यपछि वार्तामा बस्ने बताएको थियो । तरपनि, मिति र समय तय गर्न ठोस् रुपले प्रस्तुत नहुनुले समय लम्बाउन खोजेको प्रष्ट हुन्छ । यसरी लामो समयसम्म जाँदा सीमा विवाद विषयान्तर हुने र नेपालका राजनीतिक दलहरुभित्र खेल्न सकिने भएकाले सोही प्रपञ्चमा लागेको आशंका गरिएको छ ।
भारतीय विदेश मन्त्रालयको नेपाल हेर्ने नर्दन डेस्क महाशाखाका प्रमुख पियुष श्रीवास्तवलगायत सबै कर्मचारी दिल्ली दूतावाससँग त्यत्ति धेरै सम्पर्कमा आउन रुचाउँदैनन् । अहिले उनीहरुलाई भेटघाट र औपचारिक छलफल टार्ने अचुक औषधी कोरोना बनेको छ ।
भारतभित्रै केही राजनीतिक दल,प्रबुद्ध वर्ग,पूर्व कुटनीतिज्ञ तथा कर्मचारीहरु पनि वार्ताबाटै समस्या समाधान गर्नुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् । नेपालका लागि पूर्व राजदूत रणजित रे,राकेश सुद,राजनीतिक विश्लेषक तथा नेपाल जानकार एस.डी. मुनि,पूर्व जर्नेल अशोक मेहताले वार्ताबाट समस्या समाधान गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरिरहेका छन् । पत्रकार शेखर गुप्तालगायतले पनि त्यस्तै आशय पोखेका छन् ।
भारतले गत मंसीरमा जारी गरेको नयाँ नक्सा, गत बैशाखमा गृहमन्त्री राजनाथ सिंहले गरेको बाटो उद्घाटन र नेपालले गत साता सार्वजनिक गरेको नयाँ नक्सासम्म आईपुग्दा पनि वार्ताको छनक देखाएको छैन । उसका यी सबै रवैयाले वार्ता प्रक्रिया तत्काल प्रारम्भ हुने सम्भावना देखिँदैन ।
यसरी हुँदैछ काँग्रेस रुकुममा भागबण्डा
माओवादी धादिङको अधिकांश वडामा सर्वसम्मत, आधा दर्जनमा प्रयास
छठको साँझ घडीअर्वामा हिमानी
मध्यरातबाट पेट्रोलियमको भाउ बढ्ने
नक्कली छोडपत्रवाली श्रीमतीका नाममा इच्छाराजको अरबौँ
सेनापति पर्सि आफ्नै प्लेनमा नयाँ दिल्ली जाने